Sawirka ayaa hadlaya… Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi "waa uu iska difaacayaa" viruska Coruna – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Sawirka ayaa hadlaya… Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi “waa uu iska difaacayaa” viruska Coruna
Sawirka ayaa hadlaya… Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi “waa uu iska difaacayaa” viruska Coruna
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Woqooyi ayaa daabacday sawir hogaamiyaha Kim Jong-un intii uu ka qeybgalayay layliyo militeri oo ay ku jiraan rasaas nool, waxaana sawirka, oo laga qaaday goob aan la shaacin, wuxuu u muuqday mid aad u yaab badan, maadaama hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi uu “si aan caadi aheyn” uga hadlay kuwa ku hareereysanaa oo ahaa hoggaamiyeyaasha ciidamada.
In kasta oo qof kasta oo ku xeeran uu xidhnaa masar madoow, wuxuu ahaa hogaamiyaha kaliya isagoo aan xidhneyn masarka lagaga hor tago coronavirus.
Afka qoraalka ee sawirku wuxuu umuuqdaa inuu hogaamiyaha yahay qofka kaliya ee awooda inuu la tartamo viruska cusub ee Corona oo iska caabiyo.
Warbaahinta rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa werisay Talaadadii la soo dhaafay in Kim Jong Un uu shaqsi ahaan kormeeray layliyo militari oo ku aadan toogashada, oo ay kujirto soo bandhigida waxa loo maleynayo inay yihiin gantaalada gaagaaban ee gaagaaban, waana markii labaad toddobaad gudihiis.
Kuuriyada Woqooyi ayaa dhowr gantaal ku tuurtay badda Isniintii, taas oo qayb ka ah tijaabinta rasaasta, sida ay sheegeen ciidamada Kuuriyada Koonfureed, taasoo dhalisay baaqii Mareykanka iyo Shiinaha ee ahaa in Pyongyang ay dib ugu soo laabato wadahadaladii looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo barnaamijyadeeda nukliyeerka iyo gantaalada.
Wakaaladda Wararka ee Kuuriyada Woqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyaasha ciidamada Kuuriya ay la socdaan Kim, oo muujiyay “ku qanacsanaanta natiijada leyliyada.”
Hay’addu waxay tiri: “Ujeeddada laylisyada rasaasta ayaa ah in la baaro awoodda degdegga ah ee militariga ee unugyada madaafiicda dhaadheer ee hore ee garoonka.”